Wararka - Muhiimadda Iftiinka Waddada LED
Nalalka waddooyinkaayaa la sheegay in ay tahay faa'iido ka baxsan in la arki karo mugdiga.Waxaa la caddeeyey in iftiinka meelaha la deggan yahay iyo warshadaha uu yareeyo dembiyada iyo shilalka baabuurta.LED-ku wuxuu leeyahay cimrigiisa ilaa 50 000 saacadood, taasoo keentay hoos u dhaca kharashka dayactirka.
Faa'iidooyinkaNalalka Wadooyinka LED:
• Aad bay u wanaagsan tahay: Nalalka waddooyinka LED-ku waxay ilaaliyaan tamarta waxayna sidoo kale gacan ka geystaan ​​jawi wanaagsan.
• Wakhtiga cimriga dheer: Nalalkani waxay socdaan ilaa 15 sano.
• Laamiyada sii nolol dheeraad ah: Marka la barbar dhigo iftiinka ifaya, nalalka LED-ku waxay soconayaan 25 jeer ka dheer.
• Iftiin culus oo aan lahayn: Nalalka waxaa lagu hagi karaa meel gaar ah, oo inta badan ah waddada.Taas macnaheedu waxa weeye in darawaladu aanay waxyeelo ka soo gaadhi doonin dhalaalka indhahooda.
• U hoggaansanaanta RoHS: Tani waxay ka dhigan tahay in nalalka waddooyinka ee LED ay badbaado yihiin oo ma sii daayaan qiiq sun ah marka iftiinka waxyeello gaaro.Nalalka waddooyinka kuma jiraan meerkuri ama rasaas.Soo-gaadhista meerkurigu waxay keentaa sumowga meerkuriga, taas oo keeni karta in qof naftiisa la gooyo.
Iftiin buuxa: Si ka duwan noocyada kale ee ilaha iftiinka, LED'yadu waxay isla mar wada helaan dhalaal iyagoon liiqliiqin.
• Si fudud ugu shaqee cimilada qabow: Nalalka LED-ku waxay awoodaan inay si fudud ugu shaqeeyaan cimilada aadka u qabow.
• Adkeysi iyo shoog u adkaysta: Si aad ugu istaagto dhammaan noocyada xaaladaha cimilada, nalalka jidadku waxay u baahan yihiin inay noqdaan kuwo adag.Xaaladaha dabayshu jirto, walxuhu waa lagu tuuri karaa hareeraha, taasoo ka dhalan karta waxyeello u geysata iftiinka waddooyinka ee caadiga ah.Laambadaha dariiqyada LED waxay leeyihiin iska caabin sare oo shoogga ah, taas oo ka ilaalinaysa burburka dhacaya.